पुस्तकका – राजा को धर्मप्रचारक रिटर्न | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
मेरो प्रिय सम्पत्ति ब्लग पाठकहरूलाई।
म ब्लग « राजा को प्रचारक रिटर्न » जस्तै छ मेरो पुस्तक जसको शीर्षक को प्रकाशन घोषणा गर्न खुसी छु
यो किताबहरु मा छ पहिले तपाईं पहिले नै सम्पादक « Edilivre » यो आदेश गर्न सक्छन्
कागज को शीर्षक: « राजा को धर्मप्रचारक रिटर्न »
संस्करण Edilivre – APARIS
175 Boulevard Anatole फ्रान्स
चमेरो एक, 2nd तल्ला
93200 सेन्ट डेनिस
टेलिफोन: 01 41 62 14 40 / फ्याक्स: 01 41 62 14 50
इन्टरनेट संपर्क: http://www.edilivre.com/contacts
हाम्रो समाजमा मसीहीधर्म, वास्तै त्यागेर हामी बिस्तारै छन् « मिट » र हाम्रो चर्च demolished छन् कि पाउन जसको नाम मा humanism को गतिविधिलाई गर्न बलिदान छ। हामी विश्वव्यापी इस्लाम को नै असाधारण वृद्धि पाउन।
तपाईं मेरो ब्लग पोस्ट पढ्न भने, तपाईं यो हाम्रो प्रभु र राजा येशू ख्रीष्टको नजिकै फिर्ती को एक harbinger बलियो संकेत छ भनेर थाह छ।
धेरै सुरक्षित हुन सक्छ भनेर, हामी सबै दुनिया थाहा र येशू ख्रीष्ट संसारको राजा छ भनेर बुझ्न बनाउन हामी गर्न सक्छन् सबै गर्नुपर्छ र उहाँले पुरुष र राष्ट्रका न्याय गर्न चाँडै फिर्ता छ।
त्यो म यो ब्लग सिर्जना र भ्रमण र मेरो लेख पढ्न न्यानो धन्यवाद किन हो।
ब्लग अब बारेमा 500 पटक प्रत्येक दिन भ्रमण छ। यो साँचो सफलता छलफल गर्न सकिन्छ।
तर, त्यो संसारको राजा येशू ख्रीष्टको फिर्ती बताउन पर्याप्त छैन र त्यसैले इन्टरनेट पहुँच छैन सबैभन्दा ठूलो संख्या जानकारी छ भनेर म एक पुस्तक लेख्न निर्णय र सबैलाई निर्णय गर्न सक्छन् भनेर आफ्नो प्राण र उहाँले पालन गर्न चाहन्छ बाटो को विवेक।
हाम्रो गाढा समाजमा, हाम्रो विश्वास सिद्ध छ र धेरै लाग््छ परमेश्वरले त्यागेर, तर म तिमीलाई यो छैन आश्वस्त।
परमेश्वर, उहाँले शुद्ध प्रेम छ, जसले आफ्नो छोरा अनुमति छन् पर्याप्त हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हामीलाई त्यागेर पृथ्वीमा आउनुभयो र एक पार पास गर्न त्यहाँ, दुरुपयोग बेइज्जत, scourged र अन्तमा भयानक दुःखकष्टलगायत मा क्रूसमा हुन र nailed छ कहिल्यै मृत्यु हामीलाई बचाउन।
तर हाय हामी झूटा doctrines, झूटा अगमवक्ताहरू र परमेश्वरको हाम्रो दृष्टि बाधा र हामीलाई भ्रम ट्रेल्स लिन छ कि झूटा देवताहरूको भर छन्।
त्यसैले म पाठकहरूलाई परमेश्वर र उहाँको मात्र छोरा येशू ख्रीष्टको अस्तित्वको असंख्य प्रमाणहरू मेरो पुस्तक ल्याउन चाहन्थे। सबै अधिक « विश्वासीहरूलाई तर sachants » हो भनेर यो छ।
मेरो पुस्तक यो मा ब्रह्माण्डकै र सबै सृष्टि गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। यो पनि येशू ख्रीष्टको देवत्व र धरती आफ्नो आसन्न फिर्ती प्रमाणित।
इतिहास या विज्ञान एक पुस्तक जबकि, उहाँले येशू ख्रीष्टको शासन मा अदनमा को बगैचा आफ्नो फिर्ती गर्न यसको स्थापना देखि मानिसको यात्रा बताउँछन् र भावी झलक येशू ख्रीष्टको शासन पछि मानिस।
यो पनि अन्त पटक भविष्यवाणीहरूमा निर्दिष्ट र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती हाम्रो आशा अधिकतम थाहा गर्न अनुमति दिन्छ।
यो जीवन मा महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक छ के को शेयर लिन जीवनमा एक ब्रेक लिन महत्त्वपूर्ण र पनि आवश्यक छ। यो म तिमीलाई मेरो पुस्तक पढेर यस गर्न आमन्त्रण के छ।
येशू ख्रीष्टले मानिसहरूलाई र राष्ट्रका न्याय गर्न चाँडै फिर्ता आउँदै छ, यो एक निश्चय छ तर पहिले धेरै कठिन दिन अझै धरती र मानवता मार छन्। पुस्तक पढ्दा हामी अझै पनि पार गर्न छ कि यी कठिन समयमा सामना गर्न तपाईं तयार पार्न सक्छन्।
Mending बाड तपाईं हाम्रा सबै समस्याहरूको धेरै वर्षसम्म निरन्तर बढिरहेका पुष्टि गर्न अनुमति दिन्छ। तर हामी एक व्याख्या हो र पुस्तकमा छ।
म तिमीलाई मात्र मेरो पुस्तक पढ्न आमन्त्रण तर अधिक पढ्न र सत्य हामी हाम्रो ईश्वर नै नमान्ने समाजमा बताए को दैनिक वास्तविकता छैन भनेर महसुस गर्न सक्छन् भनेर पनि यो प्रकट गर्न।
, यो हाम्रो मसीही कर्तव्य छ हामीलाई सबै येशू ख्रीष्टको सिपाही होस् र « येशू ख्रीष्ट चाँडै फिर्ता आउँदै छ » असल वचन पचार गर्नु गर्न व्यग्र काम गर्दै
तिनीहरूले बप्तिस्मा र पश्चात्ताप माध्यम ख्रीष्टको आउन भने सबै सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
यसले हामीलाई तथ्य सामना बनाउन र हामी धेरै वर्ष समय रूपमा कडा रूपमा व्यक्तिहरूलाई लागि संसारमा बाँच्ने महसुस गर्नुपर्छ।
यी दैनिक rehearsals र यस्तो outsized Torrential वर्षा, बाढी, आँधीबेहरी, प्रकोप, भूकम्प, हुर्रिकानेस, cyclones, आगो, ज्वालामुखी eruptions रूपमा प्राकृतिक प्रकोप हो।
तर यो किनभने माछा, चरा, पशु र जंगली जनावर सबै ग्रह भन्दा लाख प्रति कुनै ज्ञात मृत्यु बिना पनि धेरै वर्ष को लागि हरेक वर्ष छ।
तिनीहरू पनि युद्ध र एक विश्वयुद्धको को deafening शोर, हिंसा, मान र नैतिकता को हानि छन्।
र यो पनि spiraling radicalism र जसको कट्टरपन्थीहरूको मसीही मान्छे को सदस्य massacred र desecration, बर्बरता, जलाना र चर्च को विनाश प्रतिबद्ध इस्लामी extremism छ।
पूजाहारीहरूको क्याथोलिक चर्च मा महत्वपूर्ण कमी उल्लेख छैन।
यी सबै दुष्टताहरूलाई गर्न हामी जताततै भोकमरी र दुःखी कारण, सेप्टेम्बर 29, 2008 को शेयर बजार दुर्घटना देखि दुनिया भर बसे छ कि वैश्विक विनाश थप्नु पर्छ, असरबारे सबै अधिक महत्त्वपूर्ण संसारको जनसंख्या दुई देखि वृद्धि रूपमा छ र 2012 मा भन्दा सात अर्ब गर्न 1950 मा एक आधा अर्ब बासिन्दाहरूलाई, 63 वर्ष मात्र।
पनि क्याथोलिक चर्चका पवित्र हेर्नुहोस थियो जसले वेटिकन येशू ख्रीष्ट एक सरल सहायक वा वेटिकन संग्रहालय को एक टुक्रा भएको छ जहाँ एक smelly ठाँउ भएको छ।
सबै यस पुस्तकमा वर्णन गरिएको छ।
मलाई चिन्ने सबै कुनै पर्वतमा दुर्गम छ र म राजा येशू ख्रीष्टको आसन्न रिटर्न को रूपमा धेरै राम्रो समाचार घोषणा गर्न कार्य जारी थियो किनभने म हरेस कहिल्यै थाह छ।
म हुँ जो थाह चाहने ती लागि:
मेरो जीवनी को यहाँ छोटकरीमा एउटा सानो भाग।
1957 मा फ्रान्स गर्न emigrated एक पोर्चुगाली एलेक्ट्रीशियन को छोरा, म क्याथोलिक शिक्षा, catechism, सहभागिता र JOC (जवान मसीही मजदुर) मा हुर्क्यो।
यो शिक्षाले मलाई एक मसीही मानिस मानक बनाएको छ।
म आफ्नो नियमहरू लागि परमेश्वरको प्रेम र आदर मा एक स्वस्थ जीवन जिउन सक्षम थियो म सधैं साथै प्रयास (एक सन्त हुनुको बिना!)
म मेरो बाल्यकाल देखि परमेश्वरले सधैं मेरो जीवनको भाग भएको छ भन्न पर्छ। उहाँले एक confidant, एक मित्र, एक सल्लाहकारले र दैनिक जीवनमा एक अपरिहार्य सहायता छ।
मेरो जीवनको एक धेरै लामो भाग समयमा म धेरै गाह्रो र जटिल काम थियो र परमेश्वरको यो perilous क्यारियर जिउँदै मलाई राख्न थुप्रै चमत्कारको गरे।
त्यसैले म परमेश्वरको देखि कुनै रहस्य छ र म उहाँलाई मा कुल र निरपेक्ष भरोसा।
परमेश्वरले मलाई निरन्तर उहाँको प्रेम देखाउनुहुन्छ र मलाई दैनिक जीवनमा उहाँको मदत दिन्छ। म यो प्रेम र परमेश्वरले मदत महसुस गर्न शुद्ध आनन्द छ कि तपाईं आश्वस्त।
त्यसैले म हाम्रो र आफ्नो मात्र छोरा येशू ख्रीष्टको धरती गर्न आसन्न फिर्ती लागि उहाँको प्रेम गर्न साक्षी नम्र सानो उपाय परमेश्वरको पनि त्यहाँ हुन चाहनुहुन्छ।
2009 मा merest मौका द्वारा म हामी येशू ख्रीष्टको फिर्ती मा culminate हुनेछ भन्ने लेट बाइबलीय समयमा बाँचिरहेका थिए भनेर बुझे।
पक्कै राम्रो मसीही म राम्रो catechism दिन संसारको अन्त हुनेछ सिकेको र परमेश्वरको धरती फर्कन हुनेछ त्यो दिन सबै मानिसजातिको न्याय गर्न।
Intellectually येशू ख्रीष्टको फिर्ती हाम्रो पुस्ता लागि राम्रो योजना थियो स्वीकार अघि, म धेरै अझै अन्त समयमा र धरती मा येशू ख्रीष्टको फिर्ती घोषणा सबै भविष्यवाणी संकेत विश्लेषण र छन्।
मैले बल्ल प्रमाण जानुहोस् र हरेक दिन पूरा थिए अन्त समयमा सबै संकेत र भविष्यवाणीहरू येशू ख्रीष्टको फिर्ती हेराल्ड भनेर पत्ता लगाउन थियो र यो कुनै पनि तरिका मा एक संयोग हुन सक्छ कि पूरा थिए कि भविष्यवाणीहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण थियो।
यो मौलिक मेरो जीवन परिवर्तन भएको छ र त म यो ब्लग बनाउन निर्णय « राजा को प्रचारक रिटर्न » म सबै मानवता यो अद्भुत घटना सूचित र पनि योगदान गर्न सबै भाषामा धेरै लेख प्रकाशित जो मसीही संसारको awakening सबैलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट र राजा, परमेश्वरको मात्र छोरा को फिर्ती आफ्नो मन र आफ्नो प्राण तयार पार्न सक्छन् भनेर।
मेरो पुस्तक परमेश्वरको मानिसको विकास व्याख्या गर्न र हाम्रो महिमा को यो अद्भुत फिर्ती को सबै भन्दा ठूलो संख्या सूचित गर्न, यो पाठक परमेश्वर, येशू ख्रीष्टको देवत्व को अस्तित्व देखाउन गर्ने लक्ष्य लिएको छ आफ्नो हजार वर्षको शासनको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टको।
यस apocalyptic संसारमा निश्चय येशू ख्रीष्ट चाँडै फर्केपछि छ छ छ।
: यो येशू ख्रीष्टले यसो भन्नुभयो भनेर सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक छ « म बाटो, सत्य र जीवन हुँ, कुनै एक पितालाई तर मलाई द्वारा आउँछ। « यस गरेको छैन भने, तपाईं बप्तिस्मा र धेरै बचत गर्न ख्रीष्टको आउन गर्छन्।
चाँडै ढिलो हुनेछ र पृथ्वी रुन्छिन् र सबै latecomers आँसु सबै भन्दा त्यहाँ हुनेछ।
म पनि थाहा भाग परमेश्वरको प्रेम बारी तपाईं सबै को लागि सबै आफ्नो आमाबाबु, साथीभाइ, सम्बन्ध, सम्पर्क र सबै सामाजिक नेटवर्क मेरो पुस्तक परिचय खुसी सोध्न र मुक्ति।
परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र आफ्नो मात्र पुत्र येशू ख्रीष्ट उहाँलाई आउन भएका सबैलाई अदनमा को बगैचा गर्न फिर्ती लागि धरती फर्कन चाँडै छ प्रेम।
पृष्ठभूमि हृदय तपाईं परमेश्वर र येशू ख्रीष्टको प्रेम र महिमा लागि के सबै को लागि धन्यवाद!
परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष र तपाईं येशू ख्रीष्टको प्रेम र महिमा लागि काम गर्न अनुमति दिन्छ।